Tranga iray voalaza fa momba ny iPad Pro vaovao no mampiseho modely fakantsary toradroa | Vaovao IPhone
Betsaka ny tsaho mandritra ny taona lasa izay milaza fa afaka nanao izany i Apple mampihatra fakantsary mihoatra ny iray ao aorian'ny faran'ny iPad Pro, fakan-tsary izay hampidirina amina modely toradroa na mahitsizoro arakaraka ny loharanon'ny famoahana. Androany izahay dia mamoaka vaovao vaovao miaraka amin'ity fahafaha-manao ity.
Ben Geskin, dia namoaka sary iray izay heverina fa tranga ho an'ny iPad Pro vaovao, iPad angamba tsy hahita ny mazava hatramin'ny volana septambra teo aloha, ka raha voamarina ihany ny faran'ny volana martsa, hetsika izay haseho ny iPhone 9, tsy hahita ny mazava.
Ben Geskin, izay nandefa horonantsary niaraka tamin'ny el fomba multitasking vaovao izay ho avy amin'ny tanan'ny iOS 14, dia namoaka sary tao amin'ny Twitter izay mampiseho amintsika ny fonon'ny zavatra ho hitantsika ao ambadiky ny iPad Pro manaraka. Ity tranga ity dia misy sary nohetezana eo amin'ny zoro ambony izay ahitantsika ny fakantsary, modely iray mitovy amin'ilay hitantsika ankehitriny ao amin'ny iPhone 11 Pro.
Ny fandikana hafa izay navoaka momba ny fomba iPad Pro 2020 dia hanome soso-kevitra fa ny fahasamihafana misy amin'ny maodely ankehitriny dia ho hita ao amin'ny fakan-tsary fakan-tsary, Module iray izay ao anatin'ilay maodely vaovao dia hisy lasopy 3.
Inona no vaovao ao amin'ny iPad Pro 2020
Mikasika ny atitany, ho fanampin'ny processeur A14X vaovao, ny efijery dia mety ho iray amin'ireo fanatsarana ihany koa, mandray teknolojia mini-LED. Ny kitendry natolotr'i Apple ho safidy ho an'ny mpampiasa iPad Pro, dia mety ho izany koa manavao sy mampiditra mekanisma hety Ankoatry ny fiverenan'ny lamosina, iray amin'ireo fitakiana izay toa tsy natao ho laharam-pahamehana ho an'i Apple mihitsy, farafaharatsiny hatramin'ny taona ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Tranga iray voalaza ho an'ny iPad Pro vaovao mampiseho maodely fakantsary fakan-tsary